February 2022 – OROMOTV
Mootummaa Itoophiyaafi hoogganoota TPLF gidduu ”mariin itti fufee jira” jedhan barreessitu itti aantuun Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii Amiinaa Mohaammad. Yaa’ii Gamtaa Afrikaaf Finfinnee kan turan aadde Amiinaa Mohaammad, tibba kana naannolee waraana Kaaba Itoophiyaan miidhaman-naannoo Amaaraa, Affaariifi Tigraay daawwachaa turan. Turtii isaanii kanaanis hooggantoota TPLF waliin Tigraayitti, aanga’oota naannolee Affaariifi Amaaraa akkasumas mootummaa federaalaa waliin mariyataniiru. …
Mootummaa fi hoogganoota TPLF gidduu ‘mariin itti fufee jira’- Hooggantuu UN Read More »
Koloneel Gammachuu Ayyaanaafi namootni biroon galmee isaanii jala jiran ”ammallee manuma hidhaa keessa jiruu” jedhan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa. Guyyaa har’a dhimmi isaanii mana murtiitti dhiyaatee kan ture hooggannoonni Adda Bilisummaa Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa’aa hiikamaniiru oduun jedhu miidiyaa hawaasaarra naanna’aa ture. Abokaatoon isaanii obbo Tuulii Baayyisaa BBC’f bilbilaan yaada kennaniin, dhimma Koloneel …
Galmeen cufamus, Gammachuun fa’aa amallee hidhaa jiru’-Abukaatoo Read More »